Top 5 Best Cities mandany Noely | Save A Train
Home > Travel Europe > Top 5 Best Cities mandany Noely
Top 5 Best Cities mandany Noely
Nandeha lamasinina, Fiaran-dalamby Frantsa, Train Travel Holland, Fiaran-dalamby Hongria, Fiaran-dalamby any Soeda, Fiaran-dalamby Switzerland, Torohevitra toro-lalana amin'ny lamasinina, Travel Europe
(Last Nohavaozina: 06/08/2021)
2018 dia efa any tapitra, izay afaka ihany no midika fa efa akaiky ny Noely! Ny olona mbola tsy nahazo vonona ho azy, fa ho an'ny mpandeha, fa ora tokony drafitra lavitra. Raha tadiavinao ny tanàna tsara ny mandany Noely in, dia efa nahazo anao voasarona.
Ity lahatsoratra ity dia hanome anao an-tsipiriany Lisitry ny tanàna tsara indrindra mandany Noely in. Inona koa, holazainay aminao ny zavatra mahaliana rehetra azonao atao any, fa ny zava-dehibe kokoa, ny fomba hahazoana any amin'ireo tanàna ireo lamasinina.
Amsterdam manana toerana manokana ao amin'ny lisitra io ho toy ny fety teo manomboka aloha be. Nanomboka tamin'ny Novambra, ny olona avy ao Amsterdam manomboka ny fankalazana ny Krismasy sy ny hafa rehetra ririnina zava-mitranga.
The Museum Square tao afovoan-tanàna manova ho Fairytale Noely tanàna. Eto dia afaka hankafy ny iray amin'ireo tsara indrindra Noely tsena any Eoropa. Tsy mihoatra noho ny Amsterdam mahafeno fepetra ho iray amin'ny tanàna tsara indrindra mandany Noely.
Amsterdam no tsara fantatra amin'ny trano tsara tarehy sy ny maro lakandrano, fa Manolotra ny tanàna be kokoa. Afaka mankafy ranomandry Skating, Ferris kodia mitaingina, mahafinaritra ny sakafo sy zava-pisotro isan-karazany, ary ny maro hafa.
Azonao atao ihany koa ny mankafy Noely ny andro na dia taorian'ny faran'ny. Ny ampitson'iny, taorian'ny Noely, ny vahoakan 'Amsterdam mankalaza andro Boxing.
Azonao atao ny mitsidika Amsterdam lamasinina avy saika na aiza na aiza any Eoropa. Ny foibe fiantsonan'ny mifandray amin'ny Paris, Frankfurt, Brussels, London, Zurich, Berlin, Prague, sy ny maro hafa. Misy tsipika tsy tapaka ny ankamaroan'izy ireo sy ny maro hafa ny tanàna any Holandy. Ka raha mila miaraka amin'ny lamasinina eropeana ianao dia afaka mankafy amin'ireo tanàna tsara indrindra handanianao krismasy 1 diany.
Best Cities mandany Noely, mangatsiaka indrindra pick – Stockholm, Soeda
Mety ho hatsiaka, fa ianao mbola tia fa voafidy ho any Stockholm ny Noely. Soeda dia ny firenena ho any, nandritra ny ririnina fety satria ny Swedes hihoatra ny tenany.
Ny tanàna mihitsy no tsara voaravaka mandritra ny fialan-tsasatra, ary dia manolotra zavatra maoderina sy nentim-paharazana na. Izany dia ambony safidy tahaka ny anankiray amin'ny tanàna tsara indrindra ho tia Noely.
Misy jiro eny rehetra eny sy Noely tsena eny an-dalambe miaraka amin'ny sakafo sy zava-pisotro mahamay. Ho adala ianao tsy ho fizahan-toetra ny matsiro vao mafana nanendy mofo kanelina na gingerbreads any amin'ny iray amin'ireo tanàna maro mpivaro-mofo! Soeda dia tsy hanolotra be an-dalana ny sakafo isan-karazany safidy, fa na inona na inona ianao te hanandrana hafa indray ianao ny kanelina Bun amin'ny kapoaka kafe mafana.
koa, ianao hahazo ny fahafahana hitsidika ny iray amin'ireo tanàna tranainy tsara tarehy indrindra any Eoropa. Avy eo ianao dia afaka mijoro amin'ny gaga mijery ny isan-karazany sy be pitsiny lakandrano, river fantsona, sy ny maro hafa.
Afaka mahazo any Stockholm lamasinina avy amin'ny toerana maro tany Eoropa araka ny Soeda dia mifandray amin'ny alalan'ny Copenhagen. Fanampin'izany, ianao te-haka nampiofana ny sasany amin'ireo faritra avaratra ao amin'ny firenena. Izany no toerana Avaratra jiro mamiratra sy ny tsara tarehy indrindra.
Budapest, ny renivohitr'i Hongria sy ny tanànany mahafinaritra indrindra, no iray amin'ireo toerana tsara indrindra mba handany Noely in for antony maro. Eo amin'ny renirano Danube no misy ny tanàna ary manolotra sasany mahatalanjona mitaingina sambo. Azonao jerena saika rehetra ny trano manan-tantara hatramin'ny Ony.
koa, ianao tsy maintsy mahita ny manaitra Buda Castle ary ny Parlemanta Building. Fa ny zavatra azonao atao ao amin'ny ririnina, misy maro. Avy mitaingina ny streetcars ho Skating amin'ny Budapest Park ranomandry rink, be dia be ny zavatra azo atao eto. koa, aza adino ny mitsidika ny tsena krismasy any Vorosmarty Square ary ny foara Noely ao amin'ny Basilica.
Ny foibe rail toby fa toa ny zava mahitsy avy amin'ny Harry Potter boky dia eo afovoany. Tsy mampifandray Budapest ny ankamaroan'ireo tanàn-dehibe any Eoropa sy ny maro hafa. Toby roa fanampiny manana be dia be ihany koa ny fiaran-dalamby andalana, kevitra nankany sy avy any Budapest ny tsio-drivotra.
Best Cities mandany Noely, tsy manam-paharoa pick – Strasbourg, Frantsa
Strasbourg dia tsy safidy tsara indrindra mandany Noely, fa izay koa ny Noely renivohitra. Tsy afaka ny fitsidihana tara tanàna tsara tarehy io ao amin'ny Noely.
Strasbourg mirehareha 400 taona tsena Noely, izay manazava tsara ny maha zava-dehibe ny Noely teto amin'ity tanàna ity.
koa, misy be dia be ny hafa zavatra mba hahita sy hanao. Afaka mitsidika ny voninahitra Strasbourg Katedraly na ny Mampitolagaga 18faha Palais tamin'ny taonjato Rohan. Azonao atao koa ny mijery ao mahagaga raha be hazo Noely akaikin'i Sharing Village, na mandehandeha manodidina ny afovoan-tanàna. Ny zavatra tokana azo antoka izany ianao dia tsy leo amin'ity tanàna herin'ny maizina.
Strasbourg no misy tao afovoan'i Eoropa Andrefana, teo amin'ny sisin-tanin'i Alemaina. Ny toerana dia manome fahafahana izany mba mifandray amin'ny ankamaroan'ireo tanàn-dehibe any Eoropa. Izany ihany koa dia midika fa mahita ny lamasinina ho any an-tanàna dia ho tena mora.
Basel ho any Strasbourg Lamasinina
Best Cities mandany Noely sy ny toerana tsara indrindra mba hiaina amin'ny – Geneva, Soisa
Ny iray amin'ireo tsara indrindra toerana any Eoropa, raha tsy izao tontolo izao, nandritra ny ririnina, dia Soisa. Izany no mahatonga Geneva, iray amin'ireo tanàna tsara indrindra any Soisa, dia tena tsara indrindra teo amin'ny tanàna mba hankafy ny Noely.
Ny tanàna miorina eo amoron'ny Lake Geneva, ary rehefa tonga ny ririnina, ny rehetra farihy dia mamirapiratra. An'arivony ny jiro hamirapiratra avy ao amin'ny toeram-pivarotana teo akaiky teo, tsoavaly, tranom-panjakana, haingon-trano sy ny Noely.
Ny iray amin'ireo antony nisafidiananay genva ho an'ny bilaogy Best Cities to Spend Christmas dia ny tokony hifalian'ny mpitia sakafo ihany koa amin'ny maha-tanàna azy-Noely tsena manolotra sakafo avy amin'izao tontolo izao. Inona koa, dia afaka mandeha miantsena Mandeha amin'ny Street, ary avy eo dia hitsidika ny sasany amin'ireo mari-toerana manan-danja indrindra. Anisan'izany ny Palace Firenena Mikambana, St Pierre Cathedral, Water Jet, sy ny maro hafa.
Misy tsy tapaka fiaran-dalamby avy any amin'ny tanàna hafa any Soisa tahaka an'i Bern sy Zurich izay afaka hitondra anareo ho any Geneva. Na izany aza, misy ihany koa maro ny fiaran-dalamby mankany sy avy any Italia, Frantsa, Alemaina, sy ny maro hafa. Ny lalan'ny mandeha avy amin'ny tanàna toy ny Lausanne, Paris, Venice, Milan, Nice, Verona, sy ny maro hafa. Fanampin'izany, foibe rail tobin'ny ao amin'ny tena afovoan-tanàna.
Lyon mankany Geneva avy amin'ny Train
Bern an'i Geneva Lamasinina
Ary any no manana izany, tanteraka lisitra ny tanàna tsara indrindra handany Noely. Raha te fanazavana bebe kokoa momba ny Train Traveling ny sy avy amin'ireo tanàna ireo, dia aza misalasala Mifandraisa Save A Train na oviana na oviana.
No tianao mba hiraketana ny lahatsoratra bilaogy teo amin'ny toerana, dia tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-christmas%2F%3Flang%3Dmg - (Ampidino nidina hamangy ny Embed Code)
#Hongria #traveleurope europetravel Soeda soso-kevitra trainjourney Tranride fiarandalamby tendron'ny fampiofanana fiaran-dalamby soso-kevitra Train Travel fiaran-dalamby Travel torohevitra fiaran-dalamby nankany Travel travelamsterdam travelfrance travelswitzerland